Izixhobo ze-Android-iifowuni, iitafile, iwatchwatch kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 20)
I-beta yesibini ye-Android Pie iza kwiifowuni ezintsha zeHuawei
I-beta entsha ye-Android Pie iza kwiifowuni zeHuawei kunye neNhlonipho. Fumana ngakumbi malunga ne-beta entsha ezisa ukuphucula kunye nemisebenzi emitsha.
Iifayile ezicociweyo ezininzi zeLenovo Z5 Pro, iflegi elandelayo yenkampani
Ukucaciswa kobuchwephesha beLenovo Z5 Pro kuye kwavuza. Funda konke malunga ne-smartphone elandelayo evela kwifemu.
I-OnePlus 6 sele inePie ye-Android 9.0 ngendlela ezinzileyo
I-OnePlus 6 sele ihlaziya kwi-Android 9.0 Pie, inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza kaGoogle. Sikunika iinkcukacha.
IHuawei ihambisa ibhetri egcwalisekayo ebantwini abemi emgceni wokuthenga i-iPhone XS
Umvelisi waseAsia uHuawei uthathe amathuba emigceni yakudala yeVenkile yeApple ukunika iibhetri ezingama-200 ezigcwalisekayo ezingama-10.000 mAh
IXiaomi Mi 5s Plus sele ifumana i-Android 8.0 Oreo
IXiaomi Mi 5s Plus ifumana i-Android 8.0 Oreo enkosi kuhlaziyo olutsha. Zazi zonke iinkcukacha.
I-Pocophone F1 ifumana uhlaziyo olusebenzayo ukuvula ubuso
Enye yeeterminal zeenkwenkwezi zeenyanga ezidlulileyo, iPocoph9ne F1, isandula kufumana uhlaziyo olusebenzisa ukuvula ubuso.
Ifowuni yokuqala yeHuawei ye5G iya kusongwa
Ifowuni yokuqala yeHuawei ene5G iya kusongwa. Fumana ngakumbi malunga nale fowuni kwi-Chinese brand efika kwintengiso phakathi ku-2019.
INokia 7 Plus ngokusemthethweni ifumana iMpilo yeDijithali
INokia 7 Plus ngoku inokukhuphela i-Digital Wellbeing. Fumana ngakumbi malunga nesicelo esifikelela kwifowuni yenkampani kuqala.
Ifowuni ye-Asus ROG yayiza kufika ngo-Okthobha
Ifowuni ye-Asus ROG iya kuphehlelela eYurophu ekupheleni kuka-Okthobha. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwale fowuni eYurophu.
AbakwaNokia bazakuveza ifowuni yabo entsha ngo-Okthobha u-4
AbakwaNokia bazokwazisa ngefowuni entsha ngo-Okthobha u-4. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha eza kuthi iboniswe ngokusemthethweni yifemu.
I-Xiaoai Smart Alarm Clock, iwotshi entsha ye-alarm yeXiaomi engaphantsi kwe-20 euro
UXiaomi usungule isixhobo esinexabiso eliphantsi kakhulu. Sithetha ngeXiaoai Smart Alarm Clock, iwotshi entsha yeXiaomi.
UMeizu akazukuvula i-5G ye-smartphone kunyaka olandelayo
Ngokwengxelo zamva nje ezivela kwi-CEO ye-Meizu, inkampani yase-China ayizukumilisela i-smartphone ekwaziyo ukuxhasa inethiwekhi ye-5G kunyaka olandelayo.
Ukuvuza kuyilo kunye neenkcazo zeNokia 7.1 Plus
INokia 7.1 Plus: Uyilo oluVuziweyo kunye neNkcazo. Fumana ngakumbi malunga nolu kraca lweprimiyamu entsha yoluhlu oluphakathi oluza kuthi lufike kwintengiso kungekudala.
TOP ibonelela ngeLightInTheBox
I-TOP ibonelela ngeLightInTheBox eyona minikelo ibalaseleyo kaSeptemba 2018. Fumana okungakumbi malunga nezibonelelo esizifumana kwivenkile edumileyo apho ungathenga khona ii-smartphones, iitafile, iilaptops, iimeko, izixhobo kunye nezinye izixhobo ezininzi ngamaxabiso aphezulu. Izibonelelo ezilungileyo kakhulu zokugqibela iiyure kwaye kuya kufuneka uthathe ithuba NGOKU. ENTERS!
Ukuvuza okucacileyo kobuchwephesha kwi-LG V40 ThinQ
Ukuvuza okucacileyo kobuchwephesha kwi-LG V40 ThinQ. Fumanisa ukuba yintoni inkampani yaseKorea eseyilungiselele le fowuni.
IXiaomi Mi 8 Lite izakwaziswa ngaphandle kwe China
IXiaomi Mi 8 izakwaziswa kwiimarike zamanye amazwe. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqalisa le fowuni kwiimarike ezintsha ezingaphandle kwe China.
Isibhengezo sokuqala se-OnePlus 6T silapha
Kutyhilwe isibhengezo sokuqala esisemthethweni se-OnePlus 6T. Fumana ngakumbi malunga nesiphelo sophawu lwentengiso kwisibhengezo sayo sokuqala seTV.
I-Galaxy A7 2018: I-Samsung yokuqala eneekhamera ezintathu zangasemva
I-Samsung Galaxy A7 2018: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi ngeSamsung yokuqala eneekhamera ezintathu zangasemva.
I-Google Mini yasekhaya isithethi esithengisa kakhulu kwintengiso
I-Google Home Mini ikhokelela kwintengiso yesithethi esihlakaniphile. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengisa kwezithethi zikaGoogle kwihlabathi liphela.
Ngoku kunokwenzeka ukutshixa iqhosha le-Bixby kwi-Galaxy Note 9
Ungalitshixa iqhosha le-Bixby kwi-Galaxy Note 9. Fumanisa ukuba ungalitshixa njani iqhosha lomncedisi kwisiphelo esiphakamileyo sefemu.
INokia isebenza kwifowuni yokudlala
Inkampani ye-HMD Global isebenza kwi-smartphone ye-gamers. Funda ngakumbi malunga nezicwangciso zeNokia.
Ifowuni yokuqala yeHuawei enenkxaso ye5G iyeza kunyaka olandelayo
IHuawei izakuvula ifowuni ye5G phakathi ku-2019.Fumanisa okungakumbi malunga nokuqaliswa kwale fowuni yokutyikitya kunye neKirin 980.
IMeizu V8 kunye neV8 Pro, iindawo eziphakathi zoqoqosho eziphakathi kwenkampani yaseTshayina
UMeizu wazise izixhobo ezibini eziphakathi eziphakathi: iMeizu V8 kunye neV8 Pro Yazi zonke iinkcukacha zobuchwephesha, amanqaku kunye namaxabiso.
I-Xiaomi Mi 8 Pro: Imodeli entsha enenzwa yeminwe edityaniswe kwiscreen
I-Xiaomi Mi 8 Pro: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa konke malunga nesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina oluthiwe thaca ngokusemthethweni namhlanje.
IXiaomi Mi 8 Lite: Uluhlu oluphakathi lweXiaomi
Xiaomi Mi 8: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-Xiaomi entsha ekumgangatho ophakathi etyhiliweyo namhlanje.
I-Meizu X8 isungulwe: iphaneli ye-6.2-intshi FHD +, iSnapdragon 710 kunye nokunye
I-Meizu X8 isemthethweni. Funda konke malunga nenkampani entsha ephathwayo nge-octa-core Snapdragon 710 processor evela kwiQualcomm.
UXiaomi usebenza kumabonakude amathathu nge-Android TV
UXiaomi uzokwazisa iithelevishini ezintathu nge-Android TV. Fumanisa ngakumbi malunga neemodeli ezintsha zenkampani eza kuthi kungekudala ifike eYurophu.
Meizu 16X: I-premium entsha ye-premium mid-range ngoku isemthethweni
Meizu 16X: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana konke malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina oluthiwe thaca namhlanje.
Ngaba i-Snapdragon 835 iya kuyisebenzisa iRazer Ifowuni 2?
Ifowuni yeRazer 2 inokusebenzisa i-Snapdragon 835 njengeprosesa. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha yenkampani eza kusetyenziswa yiprosesa yonyaka ophelileyo.
Isamsung iya kunika i-Galaxy S10 iyonke
Isamsung izakwazisa iimodeli ezine kuluhlu lweGPS S10. Fumana ngakumbi malunga nokuba zeziphi iifowuni eziza kuba kuluhlu lwenkampani yaseKorea.
Abenzi beFowuni abaPhezulu abaPhezulu be-Q2018 XNUMX
Isifundo esitsha sityhile ukuba zeziphi iinkampani ezifumene izibonelelo ngakumbi kule kota yesibini yonyaka. Sikunika zonke iinkcukacha.
Umphathi weXiaomi uqinisekisa iinguqulelo ezimbini zoLutsha lweMi 8 ngegradient
Kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokuphehlelelwa, iXiaomi Mi 8 Lite, ekwabizwa ngokuba yi-Mi 8 Edition yoLutsha, ine ...
Ukucoca imifanekiso yokuqala esemthethweni yeGoogle Pixel 3
Imifanekiso yokuqala esemthethweni yePixel 3 sele ivuliwe. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo lweefowuni zikaGoogle ezintsha.
I-Samsung Galaxy J4 + kunye neGalaxy J6 + sele zisesikweni
I-Samsung Galaxy J4 + kunye neGalaxy J6 +: Iinkcukacha ezisemthethweni. Fumana yonke into malunga neemodeli ezimbini ezintsha zenkampani yaseKorea esele isemthethweni.
I-Realme ibhiyozela iiyunithi ezizigidi zeefowuni ezithengiswa eIndiya
I-Realme ibhengeze ukuba ithengise iiyunithi ezizigidi ze-smartphones eIndiya. Amanani abandakanya iRealme 1 kunye ne2.
IXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro ivela kwiAliexpress kunye nemifanekiso yayo, iinkcukacha kunye nexabiso
IXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro ivele kwiAliexpress kunye nazo zonke iinkcukacha zobuchwephesha. Yazi yonke into malunga nale fowuni.
I-Galaxy S8 ifumana i-Emoji kunye nomsebenzi weSlow-Motion weGPS S9 kuhlaziyo lwayo lwamva nje
Uhlaziyo olutsha lwezokhuseleko lwe-Samsung Galaxy S8, lusinika izinto ezintsha ezibalulekileyo, ezivela kwisandla seGPS S9.
Uhlaziya njani iXiaomi kwi-MIUI 10
Ukuphehlelelwa kweNokia 9 kuya kulibaziseka kude kube nguFebruwari 2019
Ukuphehlelelwa kweNokia 9 kulityazisiwe de kwaba ngu-2019. Fumanisa ngakumbi malunga nokulibaziseka kokumiselwa kwesiphelo esiphakamileyo sefemu.
Isamsung kungekudala izakususa uluhlu lweGalaxy J
Isamsung izakususa uluhlu lweGreen J.Fumanisa ngakumbi malunga notshintsho oluza kwaziswa yinkampani yaseKorea kwiifowuni zayo.
I-Motorola One Power izakwaziswa e-India nge-24 kaSeptemba
IMotorola isandula ukubhengeza, ngetwitter, ukuba uMandla oMnye uza kufika eIndiya ngoSeptemba 24. Fumanisa.
IHuawei iqinisekisa ikhamera yesikwere esine-Mate 20 Pro
Iqinisekisiwe: I-Huawei Mate 20 Pro iya kuba nekhamera ngasemva kathathu. Fumana ngakumbi malunga neekhamera eziphezulu zeHuawei.
I-Honor Magic 2 iya kuboniswa ekupheleni kuka-Okthobha
IHlonipho Magic 2 iya kukhutshwa ngokusesikweni nge-26 ka-Okthobha. Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa kwesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina.
Isamsung iyayeka ukuba kuphela komenzi wezikrini ze-OLED ze-iPhones
Inkampani yaseKorea i-Samsung ayizukuphela kwayo eya kuthi yenze iipaneli ze-OLED zeemodeli ezintsha ze-iPhone.
Ifowuni entsha ye-Honor ibhalisiwe kwiziko ledatha le-TENAA. Funda ngakumbi malunga neenkcukacha zobuchwephesha beselfowuni elandelayo.
Ityala elisandula ukuvuza le-OnePlus 6T liqinisekisa ukuba isiphelo esiphakamileyo asizukufumana isixhobo sokumamela i-3.5mm Jack.
I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition iya kufumana i-MIUI 10 ukuphela kwenyanga
Ushicilelo lweXiaomi Mi 8 Explorer luya kufumana i-MIUI 10 kule nyanga. Fumana okunye malunga nokuhlaziya ifowuni yakho kule nguqulo yokwahlulahlula ubuqu.
I-Android Pie iza kwi-Samsung Galaxy S6 evela kumntu wesithathu ophethe ngesandla
Ukuba ungumnini we-Samsung Galaxy S6, unethamsanqa. I-ROM ikhutshiwe ukuba uyihlaziye kwi-Android Pie.
IXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro ihluziwe kwakhona, ngeli xesha, noluhlu lweenkcukacha
Uluhlu lweenkcukacha zeXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro iye yavuza. Funda konke malunga ne-smartphone elandelayo evela kwinkampani yaseTshayina.
IVivo V11 Pro ifumana uhlaziyo oluyivumela ukuba lirekhode ividiyo kwi4K
IVivo V11 Pro ifumana uhlaziyo olutsha oluyivumela ukuba lirekhode ividiyo kwisisombululo se-4K. Sikunika iinkcukacha.
Ungazikhuphela njani kwaye uzisebenzise mahala izikhumba kwiAmazfit yakho
Iwotshi entsha yeXiaomi ene-NFC, isivamvo sokubetha kwentliziyo kunye nokunye okuninzi kufika
I-Huami Amazfit Verge yi-Xiaomi's smartwatch eya kuhlala e-China okwangoku. Umlindo onesivamvo sentliziyo kunye ne-NFC.
Ukuqhuma kweGalaxy Note kubuyela kwimarike. Ngoku kuye kwiNqaku 9
Isizukulwane esitsha senqaku leNqaku, iNqaku 9, liye lafumana imeko yokuqala yokuqhushumba, inyanga emva kokunikezelwa kwayo ngokusemthethweni.
I-Galaxy J4 + kunye ne-J6 + ziyavela kwiwebhusayithi yeSamsung
I-Galaxy J4 + kunye ne-J6 + zibonakala okokuqala kwiwebhusayithi yeSamsung. Fumanisa ngakumbi ngezi fowuni zityhilwe nge-25 kaSeptemba.
IXiaomi Mi 8 enescreen sensor yeminwe iya kufika kule veki
UXiaomi uzakwazisa iMi 8 ngescreen senzwa yeminwe eskrinini. Fumanisa ngakumbi ngale modeli eza kuthi thaca ngokusemthethweni kule veki.
IXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro iya kuba neekhamera ezine
IXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro iya kuba neekhamera ezine. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha yeXiaomi eza kungekudala.
I-Galaxy A9 Pro inokusebenzisa i-Snapdragon 710 njengeprosesa
I-Galaxy A9 Pro iya kuba neprosesa ye-Snapdragon 710. Fumana ngakumbi malunga neprosesa ekhethwe yifemi yaseKorea kwifowuni yayo entsha.
I-Galaxy Note 9 yesilivere iya kuphehlelela kumazwe angama-30
Amazwe angama-30 aya kufumana i-Galaxy Note 9 ngesilivere. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwesiphelo esiphakamileyo se-Samsung kwimbala yaso entsha.
I-Pocophone F1 iya kuhlaziya kwi-Android Pie kungekudala
I-Android Pie iyeza kungekudala kwiPocophone F1. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluzayo kungekudala kwifowuni yohlobo lwesiTshayina.
I-Galaxy S10 iya kuba noyilo olwahlukileyo ngokwe-CEO ye-Samsung
IGPS S10 iya kuzisa uyilo olwahlukileyo. Fumanisa ubungqina be-CEO ye-Samsung kuyilo lweefowuni ezintsha zenkampani.
Ukucoca iilogo zeMoto G7 kunye neG7 Plus
Iimpawu zeMoto G7 kunye neG7 Plus zivuziwe. Fumana ngakumbi malunga nelogo yeefowuni ezimbini ezintsha zorhwebo ezifika ngo-2019.
Inguqulelo yehlabathi jikelele ye-MIUI 10 iza kwiifowuni zokuqala zeXiaomi. Fumana ngakumbi malunga nokwandiswa kwale nguqulo yomaleko ngokwezifiso.
Ii-smartphones ezimbini zeHuawei zibhalisiwe kunye ne-TENAA. Fumanisa ukuba inkampani yaseTshayina isilungiselele ntoni.
UXiaomi uhlekisa ngeApple ngokongeza iipakeji ezintathu kwivenkile enexabiso elifanayo neephones ezintsha
UXiaomi unika iApple impama yegloves emhlophe ngokunika iphakheji yeemveliso zayo ngexabiso elifanayo neephones ezintsha kunye negama elifanayo
Ifowuni yeRazer 2 iya kuboniswa ngo-Okthobha u-10
Ifowuni yeRazer 2 iya kutyhilwa nge-10 ka-Okthobha. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokubonisa wesizukulwana esitsha somdlalo we-smartphone.
IMeizu 16X izakufika kunye ne-IMX380 kunye ne-IMX350 sensors ngetekhnoloji yeArcSoft
Iposta entsha esemthethweni yeMeizu 16X ityhila ukuba iya kubandakanya u-Sony IMX380 kunye ne-IMX350 sensors kunye netekhnoloji yeArcSoft yokuphucula ifoto.
IBlackview BV9600 Plus isemthethweni: amanqaku esiphelo esitsha esirhabaxa
IBlackview yenze iBlackview BV9600 Plus ngokusemthethweni, iflegi entsha yohlobo. Yazi zonke iimpawu zayo.
Itray entsha yePixel 3 ibonisa ukuba kunokwenzeka kwemodeli enombala we-mint aqua
I-teaser entsha ikhutshwe yiGoogle ukuze ukwazi ukwazi umbala wesithathu ngokubambisana kwePixel 3: amanzi amanzi.
I-iPhone XS ifumana amanqaku amangalisayo kwiAntutu: iphezulu kunayo nayiphi na i-Android
I-iPhone XS entsha iyavavanywa e-Antutu kwaye ifumana inqanaba elimangalisayo. Funda ngakumbi malunga neziphumo ezifunyenwe yifowuni entsha yeApple.
I-Oppo ineefowuni ezintathu eziphakathi eziphakathi zilungele thina
U-Oppo ubhalise ii-smartphones ezintsha ezintathu kwindawo yedatha ye-TENAA. Fumanisa oko inkampani yaseTshayina isilungiselele kona.
INokia 3.1 iqala ngokuhlaziya kwi-Android 8.1 Oreo. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluqala ukufika kule fowuni.
La ngamaxabiso e-iPhone Xs kunye ne-XS MAX nge-Orenji. Fumanisa amaxabiso ezakuba nawo amaxabiso amatsha eziza kuba nawo iifowuni zeApple.
Imbeko ye-Honor 10 sele ifumana i-GPU Turbo
Imbeko ye-Honor 10 ifumana uhlaziyo olutsha, apho ubuchwepheshe be-GPU Turbo bufika khona. Funda ngakumbi ngale nto intsha.
Kuya kubakho inguqulelo yegolide yoLutsha lweXiaomi Mi 8
Ulutsha lweXiaomi Mi 8 luya kuphehlelelwa ngegolide. Fumanisa ngakumbi malunga nenguqulelo entsha yefowuni yophawu lwaseTshayina efika kule veki.
Isamsung ityhila iFowuni yekhamera ye-Quad ngo-Okthobha 11
Ifowuni yeSamsung eneekhamera ezine iza kufika nge-11 ka-Okthobha. Fumana ngakumbi malunga nomhla oya kuvulwa ngawo le fowuni.
I-Samsung Galaxy Note 8 ifumana uhlaziyo olutsha: ifumana iSlow-Motion kunye ne-AR Emojis
I-Samsung Galaxy Note 8 ifumana uhlaziyo olutsha ngenkxaso yokurekhoda kwiSuper Slow Motion nakwi-AR Emojis. Sikunika iinkcukacha.
Moto Mod ngebhodi yezitshixo yeMoto Z irhoxisiwe
Imodyuli yeMoto kunye nekhibhodi yeMoto Z icinyiwe. Fumana ngakumbi malunga nezizathu zokuba kutheni le projekthi irhoxisiwe.
Ifowuni kaHuawei esongiweyo iza ngo-2019
IHuawei izakuvula ifowuni yayo esongekayo kwintengiso ye2019. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwintengiso yale fowuni ukusuka kwifemu.
Thelekisa phakathi kwe-iPhone XS, i-iPhone XS Max, i-Galaxy Qaphela i-9, i-Galaxy S9 + kunye ne-Huawei P20 Pro,
Isizukulwana esitsha se-iPhone esasivezwe nge-12 kaSeptemba, siyasinyanzela ukuba senze uthelekiso nesiphelo esiphakamileyo se-Android
I-OnePlus 6T ayiyi kuba ne-3.5mm audio jack
Akuyi kubakho jack yomsindo eyi-3.5mm kwi-OnePlus 6T. Fumanisa ngakumbi malunga nezizathu zoku kungabikho kwisiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina.
I-Sony Xperia XZ3 ngoku inokubhukishwa eSpain
Ngoku kunokwenzeka ukugcina i-Sony Xperia XZ3 eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nokugcina isiphelo esitsha senkampani yaseJapan.
Isamsung kunye neqela leGoogle ngokuchasene nokusetyenziswa kwemiyalezo kwangoko
Isamsung kunye noGoogle balwa imiyalezo yemiyalezo. Fumanisa ngakumbi malunga nomanyano lweenkampani ezimbini kule ndawo.
I-LG V40 iya kuziswa ngo-Okthobha u-4
I-LG iya kwazisa i-LG V40 ngo-Okthobha u-4 eMzantsi Korea. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokubonisa woluhlu oluphezulu lwentengiso.
Umahluko ophambili kakhulu we-Samsung Galaxy S10 uza kuza nekhamera ngasemva kathathu
Idatha entsha iphakamisa ukuba i-Samsung Galaxy S10 iza kuza ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo, enye yazo ineekhamera ezintathu. Funda ngakumbi malunga nale nto inokwenzeka.
I-Honor 8X iza kufika nge-11 ka-Okthobha eYurophu
I-Honor 8X iya kuboniswa ngo-Okthobha 11 ePrague. Fumanisa malunga nokufika kweHonor phone kwimakethi yaseYurophu kwinyanga ezayo.
Ifowuni ye-Asus ROG isungulwe ngokusesikweni: yonke ifowuni yokudlala ene-Snapdragon 845
Ifowuni ye-Asus ROG isungulwe China. Funda konke malunga neempawu zayo, ixabiso kunye nokufumaneka kwiimarike zaseAsia.
UXiaomi utyikitya ukuba ayizukuthengisa ii-smartphones ezinamaxabiso angaphezulu kwe- $ 699
Kwiphulo layo lokuba ngumgangatho webenmarkmark kwilizwe leefoni, inkampani yaseAsia iXiaomi iyangqina ukuba ayizukuthengisa i-smartphone ngexabiso elingaphezulu kwe- $ 699.
IHuawei Watch GT kunye neWatch Watch ziqinisekisiwe
I-Huawei Watch GT kunye neWatch Watch ziqinisekisiwe eYurophu. Fumanisa ngakumbi malunga neewotshi ezimbini ezintsha ezivela kuhlobo lwesiTshayina
IMeizu 16X iya kuboniswa ngoSeptemba 19
Igosa: IMeizu 16X iza kutyhilwa ngoSeptemba 19. Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kwale fowuni intsha kraca.
I-OnePlus kunye noGoogle badibanisa ukwenza umdlalo
I-OnePlus kunye neGoogle zenza iiCrackable umdlalo omtsha. Fumanisa ngakumbi ngalo mdlalo owazalelwa kwimanyano phakathi kwezi nkampani zimbini.
Iqinisekisile i-Xiaomi Mi 8 yolutsha nge-gradient
Inguqulelo ye-Xiaomi Mi 8 yoLutsha kunye ne-gradient iya kukhutshwa. Fumana ngakumbi malunga nale nguqulo yefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina.
Imbeko yokumilisela ifowuni yayo yokuqala ye-5G kwi-2019
Imbeko iya kuphehlelela ifowuni yayo yokuqala ngenkxaso ye-5G kwi-2019. Fumana ngakumbi malunga nefowuni yokuqala evela kumenzi waseTshayina ukuba abe ne5G.
UGoogle uza kubonisa iPixel 3 eParis
I-Google Pixel 3 iya kuboniswa eParis ngo-Okthobha u-9. Fumana ngakumbi malunga nosuku lokumiliselwa kwefowuni.
Ukusekwa kweefowuni ngomlinganiso wexabiso lentsebenzo kwintengiso, yiAnTuTu
I-AnTuTu iqhube isifundo apho iifowuni ezinexabiso lentsebenzo kwiimarike zihlelwa, ngokwexabiso lamaxabiso.
I-Meizu 16X iya kuziswa ngomso: yiyo yonke into esiyilindeleyo kwifowuni entsha
I-Meizu 16X iya kubhengezwa ngomso. Fumanisa ukuba yintoni inkampani yaseAsia esilungiselele yona ngale fowuni intsha iphakathi.
UDa Vinci ligama langaphakathi leGalaxy Note 10
Isamsung sele isebenza, njengoko bekulindelekile, kwi-Galaxy Note 10, isiginali esibhaptiziweyo njengoDa Vinci, njengegama langaphakathi
Uphononongo lwevidiyo kaChuwi Hi9. Ngoku ithengiswa ngemali engaphantsi kwe- € 120 !!
Inqaku elitsha elimangalisayo le-MIUI 10: i-WhatsApp ecocekileyo kwi-jiffy yokonga indawo
Ukucoca i-WhatsApp kuthetha ukucima lonke inani elikhulu ledatha kwimifanekiso, ii-memos zezwi, iividiyo, nokunye okuninzi.
IVivo Y97 isungulwe ngokusemthethweni e China
IVivo Y97 isandula ukwaziswa e-China. Funda konke malunga nale nqanaba liphezulu laphakathi kwe-smartphone nge-Helio P60 processor evela kwi-Mediatek.
IHuawei Y9 (2019) ihluziwe kwi-TENAA kwaye uyilo lwayo luyabhencwa
I-Huawei Y9 (2019) isandula ukuvuza kwi-TENAA, iarhente yase China. Fumanisa ukuba yintoni inkampani yaseAsia esele isilungiselele unyaka olandelayo.
Ikhamera yeGlass Note 9 yeyona yesibini ibalaseleyo kwintengiso ngokweDxOMark
Abafana kwi-DxOMark sele beyihlalutyile i-Galaxy Note 9 entsha, isigxina esihleli kwindawo yesibini yekhamera efanelekileyo kwi-smartphone
Ividiyo yeHuawei: Inkonzo yokusasaza ifika eSpain
Ividiyo yeHuawei: Inkonzo entsha kaHuawei yokusasaza. Fumanisa ngakumbi malunga neqonga lokusasaza esele liphawulwe ngophawu lwaseTshayina.
I-Samsung Galaxy J6 + kunye neGalaxy J4 + ziya kubhengezwa kungekudala
Isamsung iza kwazisa ngeGalaxy J6 + kunye neGalaxy J4 + kungekudala. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kweefowuni ezimbini zaphakathi kweefowuni zenkampani.
Ifowuni enokusongelwa yakwaSamsung ayizukutyhilwa ngoNovemba
Isamsung ayizukungenisa ifowuni esongekayo ngoNovemba. Umphathi omkhulu wenkampani uqinisekisa ukuba ifowuni ayizukuboniswa ngo-2018.
Ulutsha lweXiaomi Mi 8 luya kuboniswa ngoSeptemba 19
Ulutsha lweXiaomi Mi 8 luya kuboniswa ngoSeptemba 19. Fumanisa ngakumbi malunga nokunikezelwa kwefowuni entsha kuphawu lwesiTshayina.
I-Snapdragon Wear 3100: Inkqubo entsha ye-Wear OS
I-Snapdragon Wear 3100: Inkqubo yokujonga iiWatch OS. Fumanisa ngakumbi ngale processor intsha evela kuphawu esele lubonisiwe.
I-OnePlus 6T inokuboniswa ngo-Okthobha u-17
I-OnePlus 6T iya kuboniswa ngo-Okthobha u-17. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla ekuya kuthi thaca ngawo isiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina.
UGoogle akazukuzisa iwatchwatch entsha kulo nyaka
Uninzi lube ngamahemuhemu ajikeleze i-Android Wear, ngoku i-WearOS, unyaka wonke. Ukuba iGoogle ijonge ukubamba iqonga kunye ne-Intanethi yokukhangela kwi-Intanethi iqinisekisile ukuba ayizukuveza smartwatch kulo nyaka.
I-Samsung Galaxy J5 Prime sele ifumene i-Android 8.0 Oreo
I-Samsung Galaxy J5 Prime sele ifumene i-Android 8.0 Oreo. Funda ngakumbi ngokusasazeka kwale nguqulo yenkqubo yokusebenza kaGoogle.
I-Oppo A7X isemthethweni: 6.3-intshi ye-FullHD + isikrini, Helio P60 SoC kunye nokunye
I-Oppo A7X isemthethweni. Funda malunga neenkcukacha zobuchwephesha kunye neempawu ze-smartphone entsha evela kwinkampani yaseTshayina.
I-Moto G7 ihluziwe ekunikezelweni kwaye uyilo lwayo luyatyhilwa [Ividiyo]
Umboniso wevidiyo weMoto G7 usanda kukhutshwa. Inika iinkcukacha kuyo yonke uyilo oluya kulandelelana kakuhle kwi-Moto G6.
Isikrini seXiaomi Redmi Qaphela i-6 ikhutshiwe: Iphaneli ye-6.18 with enotshi
Iphaneli kunye nomkhuseli ukuba iXiaomi Redmi Qaphela i-6 ngeyibhengeziwe. Le yi-intshi eyi-6.18 kwaye inotshi. Fumanisa!
IXiaoxun yaBantwana iSmartwatch S2, iwatchwatch engabizi kakhulu eyilelwe abantwana
IXiaoxun yaBantwana iSmartwatch S2 isungulwe e China. Funda konke malunga nale smartwatch intsha yexabiso eliphantsi eyenzelwe abantwana.
Ulutsha lweXiaomi Mi 8 luvuze ngokupheleleyo
Ukucoca uyilo kunye neenkcazo zoLutsha lweXiaomi Mi 8. Fumana okunye malunga nelungu elitsha losapho lweXiaomi Mi 8.
Ukucoca umfanekiso omtsha weHuawei Mate 20 Pro
Umfanekiso omtsha ocociweyo weHuawei Mate 20 Pro.Fumanisa okungakumbi malunga nefoto entsha ethe yavezwa isiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina olufika ngo-Okthobha.
I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition iya kuba nelinye igama ngaphandle kwe China
I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition iya kutshintsha igama layo ngaphandle kwe China. Fumana ngakumbi malunga negama elitsha lesiphelo esiphakamileyo kwezinye iimarike.
Ukuvuza okutsha kwe-smartphone kwi-TENAA: iVivo V1730EA
IVivo ibonakala ngathi ilungiselela ukwazisa okutsha kunye nokuza, njengoko isixhobo sale nkampani sivele kwi-TENAA. Yazi!
IMotorola iqala ukuvavanya iOreo kwiMoto G4 Plus kungekudala. Fumana ngakumbi malunga nokufika kwe-Android Oreo kwifowuni.
Ukucaciswa kobuchwephesha kunye nokunikezelwa kwe-Oppo A7X, kwinqanaba eliphakathi elilandelayo lenkampani
I-Oppo A7X ikhutshiwe ekunikezelweni kunye neenkcukacha zayo zobuchwephesha. Funda ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi phakathi kwenkampani yaseAsia.
Ifowuni yeRazer 2 ihambahamba nge-AnTuTu njengesiphelo esiphakamileyo
I-Razer Ifowuni 2 ihamba nge-AnTuTu kwaye ityhila uninzi lweenkcukacha zayo zobuchwephesha. Fumanisa ukuba inkampani isigcinele ntoni.
Zonke izixhobo ze-Samsung ziya kuba nobukrelekrele bokuzenzela ngo-2020
Zonke izixhobo ze-Samsung ziya kusebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela ngo-2020. Fumanisa ngakumbi malunga nokusetyenziswa kwale teknoloji kwiimveliso zenkampani.
I-HTC isebenza neQualcomm's Snapdragon 855
Ulwazi lwamva nje lubonisa ukuba i-HTC, inkampani yaseTaiwan, ivavanya iQualcomm Snapdragon 855. Funda ngakumbi malunga noku.
UXiaomi ngowesibini ngobukhulu ekwenzeni iifowuni e-Indonesia
UXiaomi uzinzile njengomenzi wesibini we-smartphone esona sabelo sikhulu kwimarike yase-Indonesia. Fumanisa!
I-ZTE Axon 9 Pro ibonakala kwi-TENAA eneempawu ezahlukeneyo
I-ZTE Axon 9 Pro idweliswe kwiphepha lesiqinisekiso se-TENAA kunye nezinto ezimbini ezahlukeneyo ezineempawu ezahlukeneyo ziyavela
Ukucocwa kweenkcukacha zokuqala zeRazer Ifowuni 2
Ukucaciswa kokuqala kweRazer Ifowuni 2 kuvuza.Fumanisa ngakumbi malunga nokucaciswa kokuqala kwe-smartphone yokudlala entsha.
I-Moto G5 kunye ne-G5 Plus ziqala ukufumana i-Android Oreo
I-Android Oreo iqala ukufika kwiMoto G5 kunye neG5 Plus. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kohlaziyo lwezi fowuni zebrendi.
Ummangaliso weXiaomi M1808D2TE uhamba ujikeleze i-TENAA. Ngaba iya kuba luLutsha lweMi 8?
IXiaomi enekhowudi "M1808D2TE" sele iqinisekisiwe yiTENAA. Yonke into ibonisa ukuba inokuba lulutsha lweXiaomi Mi 8.
I-Meizu 16X inikwe amanqaku kwi-AuTuTu njengaphakathi kuluhlu oluphakathi
I-Meizu 16X isanda kudlula kwi-AnTuTu kwakhona,. Kolu luhlu lutsha, iziphumo ezifunyenwe sisiphelo sendlela ziyavezwa. Yazi!
Khuphela izibuko elisebenzayo ekugqibeleni leGoogle Pixel GCam ye-Samsung Galaxy S9
Okokugqibela kwinguqulelo ye-Exynos ye-Galaxy S9 kukho izibuko elisebenzayo elikuvumela ukuba usebenzise imo ye-portrait kunye ne-HDR + 2017 yeGoogle Pixel.
I-Galaxy View 2 idlula i-Wi-Fi Alliance kunye neBluetooth SIG certification
Ukuphela kuka-Agasti, saphinda saxela iindaba ezithi inkampani yaseKorea yayisebenza kwisizukulwana sesibini se-Samsung Galaxy View 2 isizukulwana sesibini sinokuthi sifike kwimarike, emva kokudlula kweziqinisekiso ezibini ezifanelekileyo nezibaluleke ngokulinganayo.
I-OPPO Fumana i-X isungulwe ngokusesikweni eSpain
I-OPPO Fumana i-X ifika ngokusemthethweni eSpain namhlanje. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwefowuni entsha yohlobo lwaseTshayina eSpain
Isamsung yazisa inguqulelo yeGPS S10 ene5G
Isamsung isebenza kwiGPS S10 ngenkxaso ye5G. Fumanisa ngakumbi malunga nolu hlobo luphakamileyo oluza kuphehlelelwa yifemu kwintengiso.
Kuvuza umfanekiso omtsha weNokia 9
Umfanekiso omtsha weekhamera ezintlanu zeNokia 9 ezivuzayo. Fumana ngakumbi malunga nesiphelo esitsha sophawu lwentengiso kunye neekhamera zaso ezintlanu zangemva.
IXiaomi Mi Band 3 iyafumaneka eSpain ukusukela namhlanje
Ngoku ungathenga iXiaomi Mi Band 3 eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nokumiliselwa kwesongo sophawu lwesiTshayina eSpain.
Iimpawu eziphambili zoLutsha lweXiaomi Mi 8 zihluziwe
Ukuvuza okutsha kutshanje kutyhile ubuchwephesha obuchaziweyo bolutsha lweXiaomi Mi 8. Fumana ukuba uXiaomi usilungiselele ntoni.
Ukudlalwa kweMoto P30 ngokuvuza ngokupheleleyo kwiwebhusayithi yeMotorola
Ukucoca ngokupheleleyo iMoto P30 Dlala kwiwebhusayithi yeMotorola. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca eya kuthi ingene kwimarike kungekudala.
IVivo X23 ngoku isemthethweni: Uluhlu lwephakathi lweprimiyamu ngenotshi encitshisiweyo
IVivo X23: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa konke malunga nefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina oluthiwe thaca namhlanje.
I-Samsung Galaxy Watch ngoku iyafumaneka eSpain
IGlass Watch iyathengiswa ngokusemthethweni eSpain. Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kwewotshi entsha yohlobo lweKorea.
IAmazon iveza ithebhulethi yayo yoMlilo HD 8, isizukulwana esitsha semveliso esithengisa njengeedonathi
IAmazon isandula ukusungula iFire HD yayo entsha 8. Ithebhulethi efikelela kuzo zonke iintlobo zeepokotho ezinokuthengwa ngee-99 zeerandi.
UXiaomi ushiye uphawu lwesibini olunokuthengiswa
UXiaomi lolwesibini uphawu oluthengisa kakhulu kwihlabathi liphela. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengisa uphawu lwesiTshayina kweli candelo.
I-Samsung yokuqala ene-in-screen sensor yeminwe iya kufika ngo-Okthobha
Imodeli yokuqala ye-Samsung enomfundi ofunda ngeminwe iya kufika ngo-Okthobha. Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kwale fowuni yomsayino.
Ifoto yokuqala yeNokia 9 isivumela ukuba sibone iikhamera zayo ezintlanu ezingasemva
Sele sibona iikhamera ezintlanu zeNokia 9 okokuqala. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo lomgangatho omtsha wentsingiselo oza kungekudala.
I-LG Q Stylus Plus iphehlelelwe eIndiya nge-18-intshi 9: 6.2 isikrini
I-LG Q Stylus + isandula ukwaziswa e-India ngexabiso le-Rs 21.990. Yazi yonke into malunga nokufika kwesi sixhobo kwilizwe laseIndiya.
Ifowuni enokusongelwa yeSamsung iya kuba nezikrini ezimbini
Ifowuni enokusongelwa yeSamsung iya kuba nezikrini ezimbini. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni esongelayo evela kwinkampani yaseKorea efika ngo-Novemba.
I-Honor 8X kunye ne-8X Max zinikwe izikrini ezinkulu kunye neebhetri ezinkulu
I-Honor 8X kunye ne-8X Max ngoku zisemthethweni. Funda konke ngezi zixhobo zimbini ziphakathi kuluhlu olusuka kubhengezo olusandula ukubhengezwa.
IVivo V11 kunye neV11i: iimpawu kunye nokubalulwa kobuchwephesha kweefowuni ezintsha zohlobo
IVivo V11 kunye neV11i zisandula ukuboniswa. Funda konke malunga nee-smartphones ezintsha zenkampani yaseTshayina.
IHuawei P Smart +: entsha evela eHuawei eneekhamera ezine ezigcwele i-AI
IHuawei P Smart + isemthethweni. Yazi zonke iimpawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha zesiphelo esitsha ngeKirin 710.
I-Nubia Z18 isandula ukuboniswa yinkampani. Funda konke malunga nesi sixhobo sitsha sisebenzayo.
Inkampani yaseKorea i-Samsung isandula ukubhengeza ukuba zombini i-Galaxy Qaphela i-5 kunye ne-Galaxy S6 Edge + azisayi kuphinda zifumane uhlaziyo oluqhelekileyo lwenyanga Ukuhlaziywa kwezokhuseleko kwenyanga kwi-Galaxy Note 5 kunye ne-Galaxy S6 Edge akusekho nyani.
Ukucaciswa kwezobuchwephesha kwi-LG Q9 kuye kwavuza
Iimpawu ezahlukeneyo kunye nokubalulwa kwe-LG Q9 kuye kwavuza. Funda nzulu malunga nesi sixhobo esiza kuboniswa kungekudala.
Hlonipha Dlala, oku kukuzinikela kweMbeko kwimidlalo
Lo ngumdlalo weHonor, ukuzibophelela kweNhlonipho kwicandelo lezemidlalo, elitsala umdla wabo bangadlaliyo.
U-Sony uxhoma i-Xperia XZ3 nge-6 GB ye-RAM kwiphepha layo elisemthethweni laseTaiwan
U-Sony utyhile ukuba i-Xperia XZ3 yaseTaiwan iza ne-6GB yamandla e-RAM. Funda nzulu ngezi ndaba zamva nje
Isamsung yazisa i-smartphone yayo esongwayo ngoNovemba walo nyaka
Kuninzi esele kuthethiwe, kucingelwa kwaye kwahletywa malunga nokuba ingaba yi-smartphone yokuqala enesikrini esongelayo kwimarike, iwonga lokuba kuyo yonke into eya kwi-smartphone yokuqala yokusonga kwintengiso, inokubona ukukhanya ngo-Novemba olandelayo ukusuka kwisandla se-Samsung
Ewe, kungekudala uza kuba nakho ukucima iqhosha le-Bixby yeGalaxy Note 9
Inqaku le-Samsung le-9 le-Samsung liya kufumana uhlaziyo olutsha oluza kuvumela abasebenzisi bayo ukuba bakhubaze iqhosha le-Bixby ukuyibeka kwimephu nangona befuna.
Iifowuni ezili-10 ezinamandla zika-Agasti ka-2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
I-AnTuTu isizisela inqanaba lee-smartphones ezili-10 ezinamandla kwinyanga ka-Agasti kulo nyaka, apho ikhoyo iXiaomi Black Shark kunye nabanye.
Ifowuni enokusongelwa yeSamsung iya kutyhilwa ngo-Novemba
Isamsung iya kwazisa ngefowuni esongekayo ngoNovemba. Fumana ngakumbi malunga nokufika kwefowuni yaseKorea kulo nyaka.
IHuawei Mate 20 Lite iza kufika eSpain kwiveki ezayo
I-Huawei Mate 20 Lite iya kuphehlelelwa eSpain nge-10 kaSeptemba. Fumana ngakumbi malunga nokufika kwefowuni entsha yeHuawei eSpain.
IHuawei ayilibalanga malunga neewotswatches, ijonge ukwenza into entsha
I-CEO yeHuawei ithe inkampani ayililibalanga icandelo leewotshi ezintle kwaye endaweni yoko ifuna ukwenza umntu okhuphisana naye ofanelekileyo
Ngaba i-Samsung iya kuyivula ifowuni eneekhamera ezine zangasemva?
Isamsung inokuvula ifowuni eneekhamera ezine zangasemva. Fumanisa ngakumbi malunga nale fowuni ifanelweyo evela uphawu lwaseKorea.
Yazisa i-beta yokuqala evulekileyo ye-Android 9.0 Pie ye-OnePlus 6
I-OnePlus isungula i-Android 9.0 Pie evulekileyo ye-beta ye-OnePlus 6. Fumana ngakumbi malunga nokuqala kwale-beta evulekileyo ephezulu.
Inqaku leMotorola P30 lisungulwe: ipaneli ye-6.2, FHD + ngenotshi, i-SD636 kunye ne-5.000 mAh ibhetri
Inqaku le-Motorola P30 lisandula ukwaziswa e-China. Funda nzulu malunga nesi sixhobo siphakathi kuluhlu sisandula ukwaziswa.
Kwiintsuku ezimbini emva kokuphehlelelwa, i-Honor 8X ivuza kwi-TENAA
I-Honor 8X isandula ukuvuza kwi-TENAA, iarhente yaseTshayina, kwakhona. Funda nzulu malunga nokuveziweyo malunga nesi sixhobo.
I-Sony Xperia XZ3 ngoku iyafumaneka ukuze igcinwe eYurophu
Ixesha lokubhukisha le-Sony Xperia XZ3 livulwa eYurophu. Isiphelo esitsha sakwaSony sinokugcinwa eYurophu ukusukela namhlanje.
I-Nubia Red Magic 2 iya kufika nge-Snapdragon 845 kunye namaqhosha kwiikona ezingasentla
I-Nubia Red Magic 2 iya kuza neQualcomm Snapdragon 845 SoC kunye namaqhosha emagxeni. Funda ngakumbi malunga noku kuvuza kutshanje.
Thatha ithuba lokubuyela kwizibonelelo zesikolo kwiAmazon
IAmazon: Buyela kwizaphulelo zesikolo kwiifowuni kunye neetafile. Fumanisa iimveliso ezikhuthazayo kwivenkile ngexesha lokubuyela esikolweni
Isamsung ibonelela ngezikrini ezisongelayo kwiXiaomi nakwi-OPPO
UXiaomi kunye ne-OPPO bafumana izikrini ezisongelayo ezivela kwi-Samsung. Fumana okunye malunga nokusebenzisana kweenkampani ezimbini kule ndawo.
I-Meizu M8 ihamba nge-TENAA kwaye ityhila iimpawu zayo eziphambili
I-Meizu M8 ibethe nje i-TENAA nge-5.7-intshi HD + isikrini kunye ne-2.0 GHz octa-core processor. Siyakwandisa.
Ukucaciswa kwe-LG V40 kuvuza
Ukucaciswa kwe-LG V40 sele kuvuza. Fumanisa ngakumbi malunga nokuchazwa kwesiphelo esitsha sophawu, esele sivuziwe.
Ixabiso leSony Xperia XZ3 ityhilwe eYurophu
Ityhile ixabiso lokugqibela leSony Xperia XZ3 eYurophu. Fumana ngakumbi malunga nexabiso eliza kubakho isiphelo esitsha senkampani eYurophu.
Ngaba ii-smartphones ezintsha ziyafana?
Ngaba awucingi ukuba zonke ii-smartphones ezintsha ziyafana? Inotshi, ikhamera ezimbini ... Ngaba ayilixesha lokuba enye ifemi ithathe umngcipheko wokudala into eyahlukileyo?
I-EMUI 9 esekwe kwi-beta yePie ye-Android iza eHuawei naseHlonipho
Iifowuni zokuqala zeHuawei kunye neNhlonipho sele zine-beta yePie ye-Android. Khangela ukuba zeziphi iimodeli esele zine-beta ene-EMUI 9.
UGoogle akazukukhupha ukubukela kwePixel kulo nyaka
Ukubukela kwePixel kaGoogle ngekhe kuvule kulo nyaka. Fumana ngakumbi malunga nezizathu zokuba kutheni ukubukela kukaGoogle kungazukuqalisa ngo-2018.
Ifowuni yokuqala ye-ZTE ye-5G yokuqalisa ngasekupheleni kwe-2019
I-ZTE izakwazisa ngefowuni yayo yokuqala ye-5G ekupheleni kwe-2019. Fumanisa ngakumbi malunga nokulibaziseka ekumiselweni kwale modeli kumenzi.
I-Lenovo ukumilisela ifowuni yekhamera ebuyisekayo
I-Lenovo ikwasebenza kwifowuni yekhamera ebuyisekayo. Fumanisa umxholo wale fowuni uLenovo asebenza kuyo ngoku.
Isamsung isungule iimodeli ezimbini zeGlass J zoku kuwa
Isamsung izakwazisa iifowuni ezimbini ezintsha zeGlass J ekwindla. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni zentsingiselo ezisezantsi ezisezantsi.
IHuawei P20 ithengise ngaphezulu kweeyunithi ezizigidi ezili-10
IiHuawei P20s zidlula iiyunithi ezili-10 lezigidi ezithengisiweyo. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso ephezulu yeHuawei kwihlabathi liphela.
I-OnePlus iya kuvula ivenkile yayo yokuqala eParis
I-OnePlus iya kuvula ivenkile yayo yokuqala eYurophu eParis. Fumanisa ngakumbi malunga nevenkile yohlobo lwaseTshayina kwikomkhulu laseFrance.
I-Sharp ityhila iifowuni ezintathu zokubuyela kwayo eYurophu
I-Sharp ibeka iifowuni zayo ezintathu ezintsha eYurophu. Fumanisa iifowuni ezintsha zohlobo lweJapan oluza kuphehlelelwa eYurophu.
Igosa: IHuawei izakuveza iMate 20 nge-16 ka-Okthobha eLondon
U-Huawei usandula ukubhengeza ukuba i-Mate 20 kunye ne-Mate 20 Pro ziya kutyhilwa nge-16 ka-Okthobha eLondon. Fumanisa ukuba le femu isilungiselele ntoni.
Ukuphononongwa kwebhegi yaseMbuynow, i-USB kunye nezibuko lentloko
Dibana nebhegi yaseMbuynow, ubhaka wangoku kakhulu wokuphatha ilaptop yakho, ekwazi ukutshaja i-smartphone yakho kwaye unokunxibelelana neefowuni zakho.
I-Huawei Mate 20 Lite isemthethweni: 6.3 ″ isikrini, Kirin 710, 3.750 mAh ibhetri nokunye
IHuawei Mate 20 Lite ngoku isemthethweni. Funda konke malunga nefowuni entsha yophawu kunye neprosesa yohlobo lwe-kirin 710.
Usuku olungileyo lophawu lwefowuni lwaseFrance lwentengiso kunye nentetho kwi-IFA yeWiko Harry 2 kunye neWiko View 2 Plus.
Ukuvuza kweVivo X23 kwi-AnTuTu nge-Snapdragon 670
IVivo X23 isandula ukudlula kwi-AnTuTu kwaye ii-noas ziveze ezona mpawu ziphambili. Funda nzulu malunga nesi sixhobo siphakathi kuluhlu.
I-Kirin 980: Eyona processor inamandla yeHuawei ngoku isemthethweni
IHuawei ibeka iKirin 980, eyona processor yayo inamandla. Fumana konke malunga neprosesa ephezulu yokuphela evezwe kwi-IFA 2018.
Iselfowuni 3T 8: Ithebhulethi yokuqala ye-Android Go kwintengiso
Iselfowuni 3T 8: Ukucaciswa kwethebhulethi yokuqala ene-Android Go. Fumana ngakumbi ngecwecwe lokuqala kwimarike nge-Android Go.
Awunakho ukudlala iividiyo zeNetflix HD kwiPocophone F1
IPocophone F1 ayinakudlala iividiyo ze-HD kwiNetflix. Fumana ngakumbi malunga nezi ndaba zithe zatyhilwa kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo.
I-Wiko View 2 Go: Uluhlu lokufaka kunye notshi kunye ne-4.000 mAh ibhetri
I-Wiko View 2 Go: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga nesiphelo esitsha sophawu esivezwe kwi-IFA 2018.
Imifanekiso yokwenyani yeGoogle Pixel 3 icociwe
Ukucoca imifanekiso yokuqala yokwenyani yeGoogle Pixel 3. Fumana okuninzi malunga noyilo lweGoogle ephezulu efika ngo-Okthobha.
I-Casio Pro Trek WSD-F30: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuSungulwa. Fumanisa konke malunga nale smartwatch erhabaxa eyatyhilwa e-IFA.
IMotorola Moto One: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana konke malunga neMotorola yokuqala ene-Android One njengenkqubo yokusebenza.
Hlonipha iMilingo 2: Isibhengezo esitsha esiphakamileyo saziswa. Fumanisa ngakumbi malunga nokwaziswa kwefowuni entsha yaseTshayina.
Umfanekiso wokuqala weXiaomi Mi Mix 3 ulapha
Kutyhilwe umfanekiso wokuqala osemthethweni weXiaomi Mi Mix 3. Fumana ngakumbi malunga noyilo lwesiphelo esitsha sophawu lwentengiso lwaseTshayina olufika ekwindla.
Isibhengezo esitsha seGalaxy Note 9 apho idumisa izinto zayo eziphambili
Ukusukela nge-24 ka-Agasti ophelileyo, bonke abo basebenzisi abafuna ukonwabela i-Samsung Galaxy Note 9 entsha ngoku ...
I-ZTE isandula ukubhengeza i-Axon 9 Pro, iflegi yayo entsha. Funda konke malunga nesiphelo esitsha kwisiphelo esitsha esivela kwifemu yaseTshayina.
I-BlackBerery Key 2 Le sisiphelo esineyona nto kujoliswe kuyo ngokudibanisa ikhibhodi ebonakalayo kunye noluvo lweminwe olubekwe kwindawo yesitshixo.
Ixabiso kunye nokufumaneka kweHonase Play eSpain
I-Honor ibhengeze amaxabiso kunye nokufumaneka kwe-Honor Play yaseSpain. Funda nzulu ngezi ndaba zisandula ukutyhilwa.
I-Pocophone F1 ithengisa ngemizuzu emihlanu e-India
I-Pocophone F1 ithengiswe ngemizuzu nje emihlanu e-India. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso ephezulu yeshishini laseTshayina eIndiya.
I-Sony Xperia XZ3: Iflegi entsha yakwaSony
I-Sony Xperia XZ3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana konke malunga nesiphelo esiphakamileyo sikaSony esivezwe kwi-IFA 2018.
IHTC U12 yoBomi: Uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha
Ubomi beHTC U12: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana konke malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi kumvelisi waseTaiwan.
I-OnePlus 5 kunye ne-5T bafumana imowudi yemizobo yeeselfies kwi-beta yabo entsha
I-beta entsha ye-OxygenOS iza kwi-OnePlus 5 kunye ne-5T. Fumana ngakumbi malunga ne-beta entsha efikelela esiphelweni ngeendaba.
Ulwazi kunye nokwahluka kwemibala kwi-Sony Xperia XZ3 kuvuza ngaphambi kokumiliselwa kwayo
IXperia XZ3 iphinde ivele ngokuvuza ixesha elifutshane ngaphambi kokuba uSony ayizise ngokusesikweni, uyazi iinkcukacha kunye nemibala
IVivo X23 iza kuphehlelelwa ngemibala emithathu eyahlukeneyo
IVivo X23 izakubetha ezivenkileni ngemibala emithathu eyahlukeneyo. Fumanisa okungakumbi malunga nemibala eza kukwaziswa kwifowuni.
Uninzi lweewotshi luya kuhlaziya kuhlobo olutsha lwe-Wear OS
Inguqulelo entsha ye-Wear OS iya kufikelela kuninzi lweewotshi. Fumanisa iimodeli eziza kufumana uhlaziyo kule nguqulo intsha.
IVivo V11 Pro ityhilwe kwiwebhusayithi yenkampani ngaphambi kokuphehlelelwa kwayo
IVivo V11 Pro isandula ukutyhilwa kwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani ngaphambi kokumiliselwa kwayo, ecwangciselwe uSeptemba 6.
I-Wear OS ihlaziywa ngonxibelelwano olutsha. Fumanisa utshintsho olwaziswa nguGoogle kunxibelelwano lwenkqubo yokusebenza yokubukela.
I-Huawei iqinisekisiwe njengomenzi wesibini wee-smartphones kwihlabathi liphela
Ekuqaleni kuka-Agasti, bobabini uApple noHuawei bazise amanani abo asemthethweni okuthengisa izinto eziphathwayo kwikota yesibini ...
Uvavanyo lwe-OUKITEL K8
Sivavanye i-OUKITEL K8, i-smartphone enexabiso eliphantsi enescreen se-6-intshi kunye nekhamera ezimbini ezinempawu eziphezulu kakhulu ezingaphantsi kwe- $ 150. Ixabiso?
I-AGM X3 isemthethweni: ifowuni erhabaxa ene-Snapdragon 845
I-AGM X3 isemthethweni nge-Snapdragon 845 kunye nezatifikethi ezininzi ezenza ubungqina bayo yonke into. Funda nzulu ngale fowuni "ingenakonakala"!
I-OUKITEL C12 Pro: Uluhlu lokungena kunye notshi kunye nekhamera ephindwe kabini. Fumana konke malunga nefowuni entsha ye-OUKITEL eya kufika ngoSeptemba.
Ukufikelela kwe-ARCHOS 57: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa. Funda ngakumbi ngale fowuni iza ne-Android Yiya kwintengiso.
Ubomi beHTC U12 buhamba ngeGeekbench nge-SD636. Funda ngakumbi malunga nedatha etyhiliweyo yoluhlu oluphakathi lwefemu.
Ukucoca umfanekiso wokuqala osemthethweni we-Honor 8X Max
Umfanekiso wokuqala osemthethweni we-Honor 8X Max ulapha. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo lwefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina.
IHuawei iveza i-beta ye-Android 9.0 Pie yeefowuni ezili-9
IHuawei ibhengeza inkqubo ye-Android 9.0 Pie beta yeefowuni ezili-9. Fumana ngakumbi malunga nale nkqubo ye-beta yohlobo lwesiTshayina.
AbakwaSony bazisa iifowuni ezahlukeneyo kwi-IFA 2018
AbakwaSony bazakunikezela ngokusesikweni iifowuni ezininzi e-IFA 2018. Fumanisa ngakumbi malunga nokwaziswa kwenkampani yaseJapan eza kuba e-IFA.
I-Nubia Z18 iya kuziswa nge-5 ezayo kaSeptemba, mhlawumbi e-IFA eBerlin, eJamani. Sandisa iindaba kuwe!
Abasebenzisi beHuawei abaneeROM zesiko banyanzelwe ukuba babuyele kwiROM esemthethweni
I-Huawei inyanzela abasebenzisi ngeeROM zesiko ukuba zibuyele kwinto yokuqala. Fumanisa ngakumbi malunga neengxaki zomsebenzisi ngophawu lwesiTshayina.
I-Galaxy Qaphela i-9 sele idlulile ezandleni ze-iFixit kwaye inqaku belingalunganga
Njengesiqhelo, ngalo lonke ixesha isixhobo esitsha sifika kwimarike, abafana abaku-iFixit bafumana iyunithi yokuqalisa ukuyikhupha kwaye i-Samsung Galaxy Note 9 sele idlulile ezandleni ze-iFixit, kwaye ifumene amanqaku, afana nalawo angaphambili, 4 ngaphandle kwe-10.
Inguqulelo yokugqibela ye-MIUI 10 iqala ukuphuma
Inguqulelo yokugqibela ye-MIUI 10 iqala ukufika kwiXiaomi Mi 6. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwenguqu yokugqibela yomaleko wokwenza ngokwezifiso.
I-Galaxy Tab ye-S4 isungulwe ngokusesikweni eSpain
I-Samsung Galaxy Tab S4 ngoku iyafumaneka eSpain. Icwecwe elitsha lesiphelo esitsha sophawu lwaseKorea lwasungulwa ngokusemthethweni eSpain.
I-LG G7 Inye: Ifowuni yokuqala ye-LG ye-LG
LG G7 Inye: Iselfowuni yokuqala ye-LG ene-Android One njengenkqubo yokusebenza. Fumana ngakumbi malunga nale fowuni intsha evela kuphawu lwaseKorea.
Kutyhilwe uluhlu olupheleleyo lwamazwe apho iPocophone F1 izakwaziswa
Sele isaziwa kumazwe apho iPocophone F1 izakwaziswa khona. Fumana ngakumbi malunga namazwe apho ungathenga khona isiphelo esiphezulu.
Ngoku unokugcina i-Oppo Fumana i-X eSpain
I-Oppo Fumana i-X sele ifumaneka njengokubhukisha kwiivenkile ezintathu ezikwi-Intanethi eSpain: Media Markt, FNAC kunye ne-El Corte Inglés.
I-Huawei Mate 20 Lite ngoku iyathengiswa: iinkcukacha zobuchwephesha kunye nexabiso
I-Huawei Mate 20 Lite isandula ukuthengiswa kwivenkile ekwi-Intanethi enemvelaphi yasePoland. Yazi iinkcukacha zayo kunye nexabiso!
I-Galaxy S10 iya kuba nenzwa yeminwe kwiscreen
Zonke ezintathu zeGPS S10 ziya kuba nescreen sensor yeminwe eskrinini. Fumanisa ngakumbi malunga nenqaku eliqhelekileyo lesiphelo esitsha seSamsung.
I-POCO F1 isungulwe eSpain: Ixabiso kunye nokufumaneka
I-Pocophone F1 izakwaziswa eSpain nge-30 ka-Agasti. Fumanisa umhla wokuphehlelelwa kwesiphelo esiseSpain ngokusemthethweni.
I-Kirin 980 iya kuqala ukuhambisa kwikota elandelayo
IHuawei iya kuqala ukuhambisa iKirin 980 kwikota yokugqibela. Fumana ngakumbi malunga nokufika kwale nkqubo yeHuawei kwintengiso.
I-Pocophone F1 isungula eFrance, e-Indonesia nase-Hong Kong namhlanje
I-Pocophone F1 inokuthengwa eFrance ukusukela namhlanje. Fumana ngakumbi malunga nokumiliselwa kwesiphelo esitsha sophawu olutsha lwaseTshayina.
I-AGM X3 ihamba nge-TENAA: uyilo kunye neenkcukacha ezichaziweyo
I-AGM X3 isandula ukuvuza kwi-TENAA kunye nemifanekiso yayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha. Funda konke malunga nale smartphone ilandelayo.
Uyilo lwe-LG V40 evuzayo kwividiyo
Ukuvuza kwividiyo uyilo lwe-LG V40. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo lwesiphelo esitsha senkampani yaseKorea esiza kufika ekwindla.
Ukucocwa kokuqala kokubalulwa kwe-Honor 8X Max
Imbeko 8X Max: Ukucaciswa kokuqala kuvuza. Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi lwegama lesiTshayina eliza kuboniswa ngoSeptemba
I-Samsung Galaxy J5 (2017) iqala ukufumana i-Android 8.1 Oreo
I-Galaxy J5 (2017) iqala ngokuhlaziya kwi-Android 8.1 Oreo. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo lomnxeba waseKorea.
IVodafone Smart N9 Lite: i-Android 8.1 Go ephathekayo ngexabiso elifikelelekayo
IVodafone isandula ukusungula iSmart N9 Lite eSpain. Fumana zonke iinkcukacha malunga nale fowuni intsha nge-Android 8.1 Go!
IMagisk ayisayi kuphinda isebenze kwiifowuni zeHuawei
UMagisk uyeka ukusebenza kwiifowuni zeHuawei. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo sophawu lwesiTshayina sokuvimba usetyenziso.
I-Motorola One Power iye yavuza ngokupheleleyo
Ukucoca ngokupheleleyo iinkcukacha zeMandla oMbane e-Motorola. Fumana konke malunga nefowuni yokuqala ye-Motorola ene-Android One.
Kwiintsuku ezintathu emva kokuphehlelelwa, iinkcukacha zobuchwephesha zeRealme 2 ziye zavuza
Isiphelo sendlela esilandelayo seRealme, iRealme 2, sikhutshiwe ngokupheleleyo. Yazi zonke iimpawu zayo kunye neenkcukacha zobugcisa!
IVivo V11 Pro izakuqalisa nge-6 kaSeptemba
IVivo V11 Pro izakwaziswa ngokusesikweni nge-6 kaSeptemba. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwaseTshayina oluzayo kungekudala.
IGeekbench iqinisekisa amanqaku aliqela eZTE Axon 9 Pro
Olunye ulwazi lobuchwephesha beZTE Axon 9 Pro, njengeprosesa kunye ne-RAM, zisandula ukutyhilwa nguGeekbench. Bazi bonke!
Umfanekiso wokuqala osemthethweni we-Sony Xperia XZ3 ucociwe
Umfanekiso otyholwayo wokwazisa we-Sony Xperia XZ3 ufikile kuthi, uqinisekisa amarhe aliqela kwaye uphika abanye
U-Oppo usebenza kwifowuni yakhe yokuqala ye-5G
U-Oppo usebenza kwi-smartphone yakhe yokuqala ye-5G. Yazi zonke iinkcukacha malunga nale projekthi yenkampani.
I-Huawei Mate 20 kunye ne-Mate 20 Pro iya kufika nge-Android Pie
I-Huawei Mate 20 iya kuba ne-Android Pie ngokungagqibekanga. Fumana ngakumbi malunga nenkqubo yokusebenza eya kuthi ibe nayo iifowuni ezintsha zeHuawei.
Iikhamera ezi-5, kungabikho ngaphezulu okanye ngaphantsi, ezo zibonakala kumfanekiso wokuqala we-LG V40
I-LG V40 iya kuziswa ngo-Novemba kwaye ngoku kuza umfanekiso wokuqala onika ukukhanya kwinani leekhamera: zi-5 nje.
Yile ndlela yenziwe ngayo i-Samsung Galaxy Note 9
Njengoko ugxa wam uEder ndikukhumbuze, namhlanje i-Samsung Galaxy Note 9 iyathengiswa ngokusesikweni, indawo apho i-Samsung ingafunanga ukuba i-Samsung ithumele ividiyo kwiwebhusayithi yayo esinokuthi siyibone njengenxalenye yenkqubo yokwenza i-Samsung Galaxy Note 9.
Khuphela i-Xiaomi Pocophone F1 yamaphephadonga
Uninzi lwabasebenzisi abaqhele ukutshintsha imvelaphi yemifanekiso yeetheminali zabo, kungenxa yokudinwa, okanye kuba befuna ukuyibamba. Ukuba uyayithanda imifanekiso yamaphephadonga evela esandleni seXiaomi Pocophone, kweli nqaku sibonisa indlela oyikhuphela ngayo ukuze uyenze ibe yeyakho i-smartphone yakho.
IGreen Note 9 ifika ngokusemthethweni eSpain
I-Galaxy Note 9 isungulwe ngokusesikweni eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwebala eliphezulu le-Samsung eSpain.
IHTC U12 Plus ifumana uhlaziyo olutsha ngokuziphucula okuninzi kwinxalenye yokusebenza ngokubanzi. Kwaye kuza ne-CryptoKitties!
Iqhosha le-Bixby alinakukhubazeka kwi-Galaxy Note 9
Awunakho ukukhubaza iqhosha le-Bixby kwi-Galaxy Qaphela 9. Fumanisa ngakumbi malunga nesi sigqibo seSamsoni.
IGalaxy J2 Core: I-Samsung yokuqala ye-Android Go Ifowuni
I-Galaxy J2 Core: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana konke malunga nefowuni yokuqala ye-Samsung ene-Android Go njengenkqubo yokusebenza.
I-Wiko Sunny3 kunye ne-Sunny3 Mini: Isiphelo esisezantsi nge-Android Go
I-Wiko Sunny3 kunye ne-Sunny3 Mini: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esisezantsi nge-Android Go njengenkqubo yokusebenza.
I-OPPO R17 Pro: Iflegi entsha yohlobo
I-OPPO R17 Pro: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina olwazisiweyo namhlanje.
La macwecwe mahlanu eLenovo: i-E7, i-E8, i-E10, i-M10 kunye ne-P10. Amacwecwe ahlukeneyo aneendlela ezahlukeneyo kunye nazo zonke iintlobo zeepokotho.
I-Doogee S70: ifowuni yokuqala yokudlala emarikeni isemthethweni
I-Doogee S70 sele isemthethweni kwaye iza neempawu ezinomdla kunye neenkcukacha. Funda konke malunga neselfowuni yomdlalo weqonga onqabileyo.
Iinkcukacha ezithe kratya kwiPixel's 3 XL kaGoogle: usetyenziso lwekhamera eyenziweyo kunye neefowuni ezingenazingcingo kunye noMncedisi kaGoogle
I-Google Pixel 3 XL sele iza kufika kwaye ngoku siyazi ngakumbi malunga neefowuni zazo kunye nokusetyenziswa kwakhona kwekhamera.
INokia ibhloko ye-bootloader kuhlaziyo lwayo lwamva nje lokhuseleko
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, uninzi lwalungabasebenzisi ababezinikele ekufakweni kweROM zesiko ukuze babenakho ukufumana okuninzi kwiitheminali zabo ngenxa yohlaziyo lwamva nje lokhuseleko olusungulwe yiNokia, kuthintela ukubanakho kokuvula i-bootloader yabo iiterminal, isigqibo osithathileyo ungakhange usibhengeze ngaphambili.
I-Motorola RAZR: Le iya kuba yifowuni yophawu lophawu
Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha enokusongeleka ye-Motorola, ethi iphantsi kwegama elithi RAZR. Ifowuni esongelayo enesitayile se-retro.
I-LG V40 iza kuphehlelelwa kwintengiso ngo-Okthobha
I-LG V40 iza kuphehlelela eMzantsi Korea ngo-Okthobha. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esitsha senkampani yaseKorea esiza kufika ekwindla.
UXiaomi uthengise iifowuni ezizigidi ezingama-32 kwikota yesibini
UXiaomi uthengise i-32 yezigidi ze-smartphones kwikota yesibini. Fumana ngakumbi malunga nokuthengiswa kweefowuni zeshishini laseTshayina kwikota yesibini.
Uyilo lokugqibela lweZTE Axon 9 Pro sele lubonakalisiwe. Fumanisa uyilo oluya kuba nefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina olufika kule nyanga.
Isibhengezo sokuqala esisemthethweni seVivo X23 silapha
Kutyhilwe isibhengezo sokuqala esisemthethweni seVivo X23. Fumana ngakumbi malunga nesibhengezo sokuqala sefowuni entsha yohlobo lwaseTshayina.
Ukucoca imifanekiso yokuqala ye-LG V40
I-LG V40: Ikhamera yangemva kathathu kunye nenotshi kwimifanekiso yayo yokuqala yokucoca. Fumanisa uyilo lwesiphelo esitsha se-LG esiza kungekudala.
Iifoto zokuqala ezithathiweyo ngeGoogle Pixel 3 XL ziyafika
Imfumba enkulu yeefoto ezithathwe ngePixel 3 XL ziye zavuza ukubonisa umgangatho oligugu lokugcina ifowuni kaGoogle.
IPoco F1 ilapha, uphawu lweXiaomi oluphezulu ngexabiso eliphantsi kakhulu
IPoco F1 siselfowuni esibonakaliswa siscreen sayo esingu-5,99 "AMOLED, iSnapdragon 845, 6 / 8GB ye-RAM kunye nebhetri engama-4.000 mAh.
Ukucoca umfanekiso wokuqala weNokia X7
Umfanekiso wokuqala weNokia X7 ukhutshiwe. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kwinkampani enomfanekiso wokuqala osele uvuza.
Isamsung isebenza kwisizukulwana esitsha seGlass View
Kwiminyaka emithathu eyadlulayo, inkampani yaseKorea yasungula ithebhulethi enkulu eyi-18,4-intshi, ithebhulethi eyayingajoliswanga kuphela kwintengiso yasekhaya, Ngokwamarhe avela eKorea, iSamsung inokuba isebenza kwisizukulwana sesibini seGlass View, eyi-18- Ipilisi ye-intshi
I-OnePlus 5 kunye ne-OnePlus 5T sele inenkxaso yeTrble
I-OnePlus 5 kunye ne-OnePlus 5T ziyahambelana neProjekthi iTreble. Fumana malunga nolu hlaziyo oluvumela le nkxaso.
Isamsung isebenza kwii-smartphones ezintlanu ezintsha eYurophu
Isamsung iphuhlisa iifowuni ezintlanu zaseYurophu. Fumanisa ngakumbi malunga nokwaziswa okuzayo kwenkampani eYurophu.
I-LG yazisa ngeeNtloko ezingenazingcingo ngeQhosha loMncedisi kaGoogle
I-LG yazisa iqhosha loMncedisi kaGoogle kwii-headphone zayo ezintsha. Fumanisa ngakumbi malunga nezi ntloko zentloko zingenazingcingo kwi-LG.
IHuawei ukubonisa i-EMUI 9.0 esekwe kwiPie ye-Android kwi-IFA 2018
I-EMUI 9.0 esekwe kwiPie ye-Android iya kuziswa kwi-IFA 2018. Fumanisa ngakumbi malunga nenguqulelo entsha yomaleko owenziwe ngokwezifiso weHuawei.
I-Meizu 16X ihamba nge-AnTuTu kwaye ityhila iimpawu zayo eziphambili
I-Meizu 16X ihamba nge-AnTuTu kwaye ityhila iimpawu zayo eziphambili. Fumanisa ukuba inkampani isigcinele ntoni.
INokia 6.1 Plus kunye neNokia 5.1 Plus: Uluhlu lwegama elitsha eliphakathi
INokia 6.1 Plus kunye ne5.1 Plus: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni ezimbini eziphakathi eziphakathi kuluhlu lweNokia.
Inkampani yaseSpain, iBQ, isandula ukwenza igosa lase-Aquaris C. Fumana zonke iinkcukacha zobuchwephesha kule fowuni intsha iphantsi.
Uninzi lwabasebenzisi abagcine iNqaku 9 bakhethe uguqulelo lwe-512 GB
Nge-9 ka-Agasti, inkampani yaseKorea yazisa ngokusesikweni i-Galaxy Note 9, isiphelo esisinika umahluko onomdla ukuba siyithelekisa, ngokwamanani afika evela eMzantsi Korea, imodeli ye-512 GB yeyona ndawo igcinwe kakhulu, igqithe kude ne-128GB yokugcina. imodeli
INokia 7 Plus iya kufumana iPie ye-Android ngoSeptemba
Izolo sivakalise iindaba ezize kuthi zivela eMzantsi Afrika, apho isithethi senkampani sathi iHuawei P20, kuzo zonke iindidi zayo, iNokia 7 Plus, eya kuthi ifumane uhlaziyo kwi-Android Pie kuyo yonke inyanga kaSeptemba, izakuba i-smartphone yokuqala ene-Snapdragon 660 ukuyifumana.
Uphengululo lwesithethi seTronsmart Element Pixie
Sivavanye iTronmart Element Pixie, isithethi seBluetooth esinikezela uyilo olufundwayo, ukuzimela okuninzi kunye namandla amaninzi.
I-Caviar Samsung Galaxy Note 9 iza ne-1 kg yegolide kunye neendleko malunga ne-50.000 euro
ICaviar ilungiselele i-Samsung Galaxy Note 9 enekhilogram yegolide ngasemva ngexabiso lama-50.000 euros. Fumanisa!
I-Galaxy Qaphela i-9 iphantsi kovavanyo lokunyamezela oludumileyo
IGreen Qaphela i-9 ipasisa uvavanyo lweJerryRigEverything. Fumanisa ngakumbi malunga novavanyo olusezantsi kwesiphelo se-Samsung.
I-OUKITEL K8 sele ithengisiwe kwangaphambili kunye neenzuzo ezinkulu
Sele ithengisiwe ngaphambi kwe-27 ka-Agasti, i-OUKITEL K8 ngesaphulelo se-20%, isikrini esine-6 ​​", i-4 GB ye-RAM, i-64 yeROM, kunye nekhamera ezimbini ngexabiso eliphezulu
I-Huawei Mate 20 iya kuba nekhamera ngasemva kathathu
I-Huawei Mate 20 izakuba nekhamera ngasemva kathathu. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina olufika ekwindla.
Imifanekiso emitsha ecociweyo yeVivo X23
Kutyhilwe uyilo lokugqibela lweVivo X23 ngenotshi kunye nekhamera ephindwe kabini. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina oluzayo kungekudala.
Ifowuni, ithebhulethi okanye i-phablet? Imbeko iqinisekisa i-8X, isixhobo esinesikrini esikhulu
Imbeko iqinisekise nje ubukho be-Honor 8X, uphawu lweselfowuni elandelayo enescreen esikhulu. Sandisa iindaba kuwe!
IXiaomi Pocophone F1 ihamba ngeGeekbench kwakhona, ngeli xesha ine-8GB ye-RAM
IXiaomi Pocophone F1 ihamba ngeGeekbench ene-8GB ye-RAM. Fumanisa okungakumbi malunga nokubonakala kwebenmarkmark!
Nge-9 ka-Agasti, amaKorea avela eSamsung athi thaca ngokusesikweni i-Galaxy Note 9, isiphelo esiza emarikeni ukuzama ukuphucula Ngokwamajelo eendaba aseKorea, oovimba beGalaxy Note 9 bangaphezulu kwaleyo ifunyenwe yi-Galaxy S9 xa yaziswa ngokusesikweni.
I-ZTE isandula ukuveza ipowusta ebhengeza ukumiliselwa kwe-Axon 9, indlalifa ye-Axon 7. Fumanisa ukuba yintoni inkampani egcinele thina!
I-Huawei P20 iya kuhlaziywa kwi-Android Pie ngoSeptemba
Ngalo lonke ixesha umenzi ephehlelela itheminali entsha, kuxhomekeke kweliphi ixesha lonyaka esenza njalo, baninzi abasebenzisi abathathela ingqalelo isantya njengoko kubhengeziwe sisithethi sikaHuawei eMzantsi Afrika, iHuawei P20 iyakufumana i-Android P kuyo yonke unyaka wenyanga kaSeptemba
Ipapashe iifoto zokuqala ezithathwe ngeNokia 9
Iifoto zokuqala zekhamera yeNokia 9 zilapha Fumanisa ngakumbi ngezi foto zithathwe ngekhamera ephezulu.
Iinguqulelo ezihlaziyiweyo ezintsha zeXiaomi Mi MIX 3
Ukuhanjiswa okutsha okucociweyo kwiXiaomi Mi MIX 3. Fumana ngakumbi malunga noyilo lwesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina oluza kufika kwiinyanga ezimbalwa.
I-Huawei Nova 3 kunye ne-3i ziya kuthengiswa ngombala we-Iris Purple e-India ukusukela kwiveki ezayo
IHuawei Nova 3 kunye neNova 3i ziya kufumaneka ngombala omfusa Iris kwiveki ezayo eIndiya. Fumanisa!
IHuawei P20 Pro iya kwazisa ngemibala emibini emitsha kwi-IFA 2018
I-Huawei P20 Pro iya kongeza imibala emibini emitsha kuluhlu lwe-IFA 2018. Fumanisa ngakumbi malunga nohlobo olutsha lwesiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina
IHuawei Mate 20 Lite iya kusebenzisa iKirin 710 njengeprosesa
I-Huawei Mate 20 Lite iya kuthwala iprosesa yaseKirin 710. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kumenzi waseTshayina, iinkcukacha eziza kuthi.
I-ZTE ingabonisa iAxon 9 kwi-IFA 2019
I-ZTE izakubonisa i-Acon 9 ngokusesikweni kwi-IFA 2018. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha eyakuboniswa yinkampani.
IMotorola One ihamba ngeTENAA kwaye ityhila uyilo kunye neempawu zayo
IMotorola One ithathe nje ukhenketho lweTENAA. Fumanisa uyilo kunye nazo zonke izinto kunye nobuchwephesha obuchaziweyo kule fowuni!
I-OnePlus 6T iya kuphehlelelwa ngo-Okthobha kunye nokunyuka kwamaxabiso kubandakanya. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina.
USony utyhila imihla eziza kufumana ngayo iifowuni ze-Android 9.0
USony utyhila uluhlu kunye nemihla yeefowuni eziza kufumana iPie ye-Android 9.0. Yazi izixhobo eziza kuyonwabela le OS intsha!
Iimpawu zeMotorola One ezivuzayo: i-OS, i-RAM, kunye nesantya seprosesa sivelisiwe
IMotorola One ivele nje kwiGeekbench ecaleni kwezinye zeempawu zayo eziphambili zobuchwephesha. Yazi ukuba le mobile iza kuza nayo!
I-Sony Xperia XA3 Plus sele ivuza nje kwiGeekbench Benchmark. Fumanisa into asigcinele yona uSony ngale fowuni ilandelayo!
Ngokuka-DisplayMate, isikrini seGlass Note 9 yeyona ilungileyo kwihlabathi leefoni
Kwiminyaka yakutshanje, siyibonile indlela abenzi abaphambili abangakwaziyo ngayo ukuhambisana nezinto ezintsha zonyaka kwaye bakhetha ukubheja kumboniso we-Samsung Galaxy Note 9 iqinisekisile, kwakhona, ukuba i-Samsung yeyona mveliso iphaneli ilungileyo kwihlabathi.
IHuawei's Kirin 980 ayizukuba ne-Cortex-A77 cores, kodwa i-ARM's Cortex-A76
Iprosesa elandelayo yeHuawei, iHiSilicon Kirin 980, ayizukuxhotyiswa ngeeCortex-A77 ezine, kodwa ezineeCortex-A76 cores. Fumanisa!
IHuawei Nova 3 ithengise iiyunithi ezizigidi ezibini ngenyanga
IHuawei Nova 3 ifikelela kwiiyunithi ezizigidi ezibini ezithengisiweyo. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo yeemodeli ezintsha zohlobo lwaseTshayina.
Umjikelo wokuqhwaba i-Samsung: isiphelo sayo esiphezulu safumana indawo yokhuselo inyanga nenyanga unyaka wonke
Akufanelekanga ukuba sonwabe ngezi ndaba, kuba ziyimfuneko kuye wonke umenzi, kodwa ngenxa yokunqongophala kwabaninzi, siyibalaselisa kwi-Galaxy S8 / S9.